Fiainam-pikambanana: mivoy ny fisondrotana ny Jem | NewsMada
Fiainam-pikambanana: mivoy ny fisondrotana ny Jem
Fikambanana ivondronana tanora resy lahatra fa izy ireo no andrin’ny firenena sy iankinan’ny fampandrosoana ny Jeunes Emergence Madagascar (Jem). Efa tamin’ny taona 2014 ny niorina ny fikambanana, tsy manao politika. Manana ny maha izy azy ny Jem ary mametraka tanjona mazava.
Tsy naman’ny mipetrapetra-potsiny na miandry toloram-potsiny ny mpikambana ary izay indrindra no mahatonga azy ireo hivoy sy hanaparitaka io fomba fijery tia fisondrotana na « émergence » io. Io, rahateo, ny antom-pisian’ny fikambanana. Araka ny nambaran’ny mpitondra tenin’izy ireo, tokony hahafantatra sy hampihatra io fomba fijery na fitondrana ny fiainana amin’ny ankapobeny io ny vahoaka, indrindra ny tanora.
Ho fanatrarana izany tanjona izany, manome fiofanana mikasika io fisondrotana io ny fikambanana, isaky ny talata sy ny asabotsy. Ankoatra izany, manohana ireo tanora manana tetikasa ihany koa izy amin’ny fanatanterahana izany, miainga amin’ny fototra tokony hatao voalohany.
Araka ny vinavinan’ny fikambanana, tanora miisa 12 000 ny tokony hahafantatra sy hanatanteraka ity fomba fijery ity. Efa maro ny asa vita, saingy tsy ampy. Noho izany, andrasana, amin’izao fotoana izao, ny fanatanterahana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Jem sy ny minisitera voakasik’ity vina ity, araka ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny fikambanana hatrany.